विश्वकप हेर्न जाने ? कोक खानुस् - Arthakoartha.com
विश्वकप हेर्न जाने ? कोक खानुस्
काठमाडौं, ८ फागुन । यो महिना कोक पिउनु हुन्छ भने रसियामा हुने फिफा विश्वकप २०१८ प्रत्यक्ष हेर्ने मौका पाउन सक्नु हुनेछ । फेब्रअरी १५ देखी अप्रिल १५ तारिकसम्म कोक पिउने ४० जना भाग्यसाली उपभोक्ताहरुले फिफा विश्वकप २०१८ मा रसिया जान पाउँने छन् ।
कोक खाम्, रसिया जाम अफर अन्तर्गत कोकाकोलाका उपभोक्ताहरुलाई सम्पुर्ण खर्चसहित रसियामा ह्ने विश्वकप २०१८ प्रत्यक्ष हेर्ने मौका दिदैछ । यस योजना अन्तर्गत ४० भाग्यशाली उपभोक्ताहरुले रसिया जान पाउनेछन् । यसका साथै दुई सय उपभोक्ताहरुले दैनिक आकर्षक उपहार जित्न सकिने कम्पनीद्धारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । फिफा लोगो अंकित फिफा बल्र्डकप विशेष उपहारहरु स्पिकर, हेडफोन, पेनड्राईभहरु जित्न सकिने छ । यस्ते हरेक दिन २ जनाले २४ इन्चको टेलिभिजन समेत जित्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो अफर ३०० एमएल, ५०० एमएल, १.५ लिटर र २.२५ लिटरको कोक, फन्टा, स्प्राइट र कोक जिरोमा लागु हुनेछ । यसमा सहभागि हुनका लागि उपभोक्ताले १० अंकको युनिककोड जुन लेबलको पछाडि राखिएका हुन्छ, त्यसलाई ३७७२२ मा एसएमएस गर्नु पर्नेछ ।
बैंक अफ काठमाण्डुको ‘बीओके स्मार्ट सेभिङ अकाउन्ट’ सार्वजनिक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश